युवती आफूतिर आकर्षित भएको कसरी थाहा पाउने ? यी हुन् ७ संकेत
जब कुनै युवकले कुनै युवतीलाई मन पराउँछन्, तब उसले तपाईंलाई इम्प्रेस गर्न कोसिस गर्छन् र त्यस्ता केही संकेत दिन्छन्, जसमार्फत कुरा युवतीको मनसम्म पुग्न सकोस्। यस हर्कतलाई तपाई उनीहरूको फ्लर्टिङ क्षमता पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तर, यस्तो होइन कि जिस्क्याउन केवल युवकलाई आउँछ। यस मामिलामा युवतीहरू पनि कम छैनन्।
युवतीले यदि कसैलाई मन पराउँदैछिन् भने उनी आफ्नो हाउभाउ र व्यवहारमार्फत यसको संकेत दिन्छिन्। उनले त्यस्ता केही संकेत दिन्छिन्, जसबाट थाहा हुन्छन् कि उनले तपाईंलाई मन पराइरहेकी छिन् । खासमा त युवतीहरूलाई कसैले पनि पुरै तरिकाले जान्न सकेको छैन, तर केही त्यस्ता संकेत अवश्य छन्, जसमार्फत तपाईंले आफूलाई युवतीले मन पराएको कुरा जान्न सक्नुहुन्छ।
नजिक आउनुः यदि कोही युवती कुराकानीका क्रममा युवकको नजिक आउँछिन् भने यसको मतलब उनी ती युवकलाई मन पराउँछिन् भन्ने हो।
कपाल मिलाउनुः यदि युवतीले पटक-पटक आफ्नो हात कपालमा पुर्‍याउँछिन्। तपाईँलाई देखेपछि कपाल मिलाउँछिन् वा हातले लट्टा चलाउँछिन् भने पक्कै पनि उनलाई तपाई आकर्षक लागेको हुनुपर्छ। उनी तपाईसँग कुराकानी गर्न आतुर छिन्।
सम्झनुस् आँखाको भाषाः जब महिलाहरूले कसैलाई जिस्क्याउँछन्, तब उनीहरूको आँखाले पनि धेरै कुरा बोलिरहेको हुन्छ। यदि कुरा गर्दा गर्दै केही समय नजर मिलाएपछि उनले आफ्नो आँखा झुकाउँछिन् भने तपाईंका लागि उनको मनमा केही खास छ भन्ने सम्झनुस्।
लुक्दैन मुस्कानः जब युवतीले कसैलाई मन पराउँछन् वा जिस्कन्छन् तब ती व्यक्तिसामु पुग्दा उनको मुस्कान लुक्न सक्दैन। हरेक पटक तपाईंको अगाडि आउँदा उनको अनुहारमा आउने मुस्कानले नै सबै कुरा भन्छ।
कपडा मिलाउनुः यदि कोही युवतीले कसैलाई मन पराउँछन् भने उनलाई इम्प्रेस गर्न कुनै मौका गुमाउन चाहँदैनन्। यदि तपाईंसामु आउँदा उनले आफ्नो कपडा मिलाएजस्तो गर्छिन् भने सम्झनुस् उनले तपाईंलाई मन पराउँछिन्।
कुराले रिझाउनेः जो महिला केटासँग जिस्कने काममा पोख्त हुन्छन्, उनीहरूले आफ्नो आवाजको पनि राम्रो प्रयोग गर्छन्। उनीहरूले आफ्नो आवाजलाई आकर्षक बनाउँछन्। जसकारण, युवक पनि आकर्षित होस्।
स्पर्शको महसुसः यदि कुनै जानेरै युवतीले तपाईंको हात वा काँधमा हात राख्छिन् भने यो सिधा संकेत हो कि उनले तपाईँलाई मन पराउँछिन्।
पेट्रोल पम्पमा इन्धन भर्न जाँदा ध्यान दिनुपर्ने ६ कुरा
कस्तो अवस्थाका कोरोना संक्रमित घरमै बस्न सक्छन् ?
बिना मेकअप सुन्दर देखिने १० उपाय